Dowladaha Xubinta ka ah Dowladda Federallku ma yeela karaan Dastuurro u gaar ah? | XAL DOON
Home ARTICLES Dowladaha Xubinta ka ah Dowladda Federallku ma yeela karaan Dastuurro u gaar...
Dowladaha Xubinta ka ah Dowladda Federallku ma yeela karaan Dastuurro u gaar ah?
Dastuurka Federaalka iyo Ahmiyadda uu u leeyahay Nidaamka Federaalka
ilaa intee Haboontahay in Dowlad Gobaleedyadu yeeshaan Dastuurro u gaar ah
isbarbardhiga Dastuurrada Dowladaha Federaalka ee Arrintaas khuseya
Muxuu Dastuurka Federalku ka qabaa in Dowlad Gobaleedyadu yeeshaan Dastuurro u gaar ah ?
Awoodda Maxkamadda Dastuuriga ee Burrinta Dastuurrada Dowlad Gobaleedyada ee Khilaafsan Dastuurka Federaalka
Dastuurka Soomaaliya ee sida KMG loo ansixiyay 1/8/212, wuxuu qeexayaa in Soomaaliya ay qaadatay Nidaamka Federalka Halkaasna looga guuray Nimaadkii Dowladda mideysan ( Unitary State ) ee Soomaaliya ku dhaqmi jirtay tan iyo markii ay qaadatay xurriyadda 1960.
Dastuurka Federaalku wuxuu Xaddidayaa Xiriirka ka dhexeeya Dowladda Federaalka iyo Dowladaha Xubinta ka ah Dowladda federaalka Ama haddii si kale loo dhaho xiriirka ka dhexeeya Dowladda Fedaraalka iyo Dowlad Gobaleedyada , sidoo kale Dastuurku wuxuu dhigayaa mabaadi’da asaasiga ah ee nidaamka Federaalka iyo xiriirada iskaashiga Heerarka Dowladaha, heer fedraal iyo heer Dowlad Gobaleed.
Maadaama Nimaadka Federaalku uu yahay Nidaam ku Cusub Soomaaliya waxaa soo baxay qaadashadiisa kadib Su’aalo kala duwan oo ay ka mid tahay Su’aasha ah ilaa intee ayay haboontahay in Dowlad Gobaleedyadu yeeshaan Dastuurro u gaar ah? sidaa awgeedna waxaa lama huraan ah in su’aashaan looga jawaabo si cad oo waafi ah.
si kastaba ha ahaatee Daraasadaan Gaaban waxay ka jawaabi doontaa su’aalo ay ka midyihiin kuwan:
Ma haboontahay in Dowlad kasta oo ka mid ah Dowlad Gobaleedyadu yeelato Dastuur u gaar ah?
Haddii ay Haboon tahay Ma jiraan Shuruudo loo baahan yahay in laga helo dastuuradaas?
Dastuurka Federaalka KMG ahi ma ka jawaabaa Su’aalahaan?
waa Maxay Xiriirka ay tahay in uu ka ka dhexeeyo Dastuurka Federaalka iyo Dastuurrada Dowlad Gobaleedyada?
Maxkamadda Dastuuriga ahi awood ma u leedahay Burrinta qoddobada Dastuurada Dowlad Gobaleedyada ee ka horimaanaaya Dastuurka Federaalka?
waxaan Shaki ku jirin in Daraasad noocaani ah ay leedahay ahmiyad wayn si looga hortago looga baaqsado isku dhac iyo is khilaaf ku yimaado Mabaadi’da Dastuurka Federaalka iyo Dastuurada Dowlad Gobaleedyada.
ugu Dambeyntii Daraasadaan waxay ka kooban tahay qaybaha soo socda:
ilaa intee ayay Haboontahay in Dowlad Gobaleedyadu yeeshaan Dastuurro u gaar ah?
Had iyo jeer Dastuurrada Dowladaha Federallku waxay gundhig u yihiin nidaamka Federaalka waxayna Xiddidaan Nooca Federaal ee Dowladdu qaadanayso, sidoo kalana waa asaaska iyo saldhiga Dowladnimada, sababtoo ah waxaa lagu qeexaa mabaadi’da asaaska u ah qarannimada iyo mabaadi’da saldhiga u ah nidaamka federaalka iyo xiriirka Heerarka Dowladaha, sidaa awgeedna wuxuu si isku mid ah u hagayaa Dowladda federaalka iyo Dowlad gobaleedyada.
waxaa dhici karta in dadka qaar u fahmaan in Dastuurka Federaalku uu khuseeyo kaliya Dowladda federaalka oo uusan khuseeyn Dowlad gobaleedyada hase ahaatee arrintaas waa aragti aan saxnayn oo ka fog nuxurka mabaadi’da iyo tilmaamaha ay ximbaarsan yihiin dastuurrada Federaalka.
waxaa kale oo xusid mudan in dastuurrada Dowlada federaalku ay yihiin Sharciga ugu sarreya dalka oo ay asaga ay waajib tahay in la waafajiyo dhammaan noocyada kale ee shuruucda oo ay ku jiraan dastuurrada Dowlad Gobaleedyada, taas oo micnaheedu tahay in aanay jiri Karin ama aan la soo saari Karin dastuur Dowlad gobaleed oo ay ku jiraan qoddobo ama mabaadi’ khilaafsan tan ku xusan Dastuurka Federaalka.
Marka aan eegno dastuurka Federaalka Soomaaliya isna sidaa kama duwana oo wuxuu xaddidayaa nidaamka iyo Mabaadi’da Federaalka ee Jamhuuriyadda Fderaalka Soomaaliya, ayada oo ay xusid mudan tahay in dastuurku uu qeexaayo arrimahaan:
Awoodaha heerarka Dowladaha, heer federaal iyo heer Dowlad Gobaleed
Hannaanka maaliyadeed ee Federaalka ( fiscal federalism) oo ay ku jiraan qaabka dakhliga qaranka ay u qaybsanayaan heerarka Dowladaha iyo hannaanka qaybsashada dakhliga kheeraadka dabiiciga ah.
iyo arrimo Kale oo Dhammaantood khuseeyo Nidaamka Federaalka.
si la mid ah Dastuurrada wadama federaalka, dastuurka Soomaaliya wuxuu Xaddidayaa Mabaadi’da iskaashiga heerarka Dowladaha , qaybsashada kheeraadka iyo awoodaha oo ah arrimo wada khuseeya heer kasta oo Dowladeed.
Ma habboon tahay in gobolladu yeeshaan dastuurro iyaga u gaar ah ?
Dastuurrada wadamada Federaalka waxay u qaybsamaa laba nooc marka laga hadlaayo xaqa dowlad gobaleedyadu u leeyihiin in ay samaystaan Dastuurro u gaar ah:
Dastuuradoodu waxay qeexayaa in aan loo baahnayn dastuur aan ahayn kan Federaalka oo si isku mid ah u nidaaminaayo qaab-dhismeeyada heer federall iyo kan heer Dowlad Gobaleed Wadamadaas waxaa ka mid ah : wadamada Nigeria iyo Belgiumka oo Dastuurradooda federaalka ay ku jiraan qodobo faah-faahsan oo qeexaya qaab-dhismeedka Labada heer dowladeed , Sidoo kallana Dastuurrada wadamadaan waxay tilmaamayaan in Gobbaladu aysan ubaahnayn dastuurro gaar u ah Maadaama qaab-dhismeedka dowlad Gobaleedyada si qoto dheer loogu qeexay Dastuurka qaranka si la mid ah sida loogu qeexay qaab-dhismeedka Dowladda Federaalka, sidoo kale dalka Koonfur Afrika ayaa ka mid ah dalaalka Dastuuradooda ay faah-faahinnayaan qaab-dhismeedka Dowlad gobaleedyada, Hase ahaatee wadanka koonfur Africa wuxuu kaga duwan yahay Nigeria iyo Belgiumka in goballadu ay xur u yihiin in ay samaystaan dastuurro u gaar iyada oo ay lama huraan tahay in Maxkamadda dastuurigu ay Caddayso in uusan khilaafsanayn Dastuurka Qaranka ee Heer federaal.
Dastuurradooda Federaalka laguma qeexo qaab-dhismeedka xukuumadaha Gobollada , Sidaa awgeena Dowlad Gobaleedyadu waa in ay Samaystaan Dastuurro u gaar ah si ay u qeexaan Qaab-dhismeedka Dowlad Gobaleedka hase ahaatee Dastuurka Heer federal wuxuu Dowlad Gobaleedyada ku xiraa Shuruudo :
Dastuurka dalka Swiss wuxuu ka dalbayaa Dastuurada gobollada inay ahaadaan kuwo dimuqraadi ah ayna Afti dadwayne ku ansixiyaan shacabka gobolk.
Dastuurka dalka Germany wuxuu u oggolaanaya gobollada in ay ansixyaan dastuuradooda u gaarka ah, laakin waa in ay noqdaan kuwa waafaqasan mabaadi’da jamhuuriyadda Dimuqraadiga iyo nidaamka bulasho ee lagu maamulayo talinta sharciga
Dalka Argentina, Gobollada waxaa looga baahan yahay inay soo saaran dastuuradooda oo ku xiran shardiga ah nidaamka xukuumadda oo ah mid Jamhuuri ah oo ku dhisan mataalada wakiilada shacabka taasoo looga baahanyahay inay leedahay dawlad hoose oo madaxbanaan.
Ugu Dambeyntii , Haddii aan soo uruurinno Waxaan dhihi karnaa, Dawladaha federaalka qaar ka mid ah, qaab-dhismeedka Dawlad goboleedyada waxaa lagu qeexaa Dastuurka qaranka, taas oo ka dhigan in aan loo baahnayn Dastuurro ay yeeshaan Dowlad Gobaleedyadu, Halka dalalka kale oo federaal ah, Dastuurka qaranka aan lagu xusin qaab-dhismeedka Dowlad Gobaleedyada, Taas oo ka dhigan in qaab-dhismeedka Dowlad Gobaleedka loo dhaafay Dastuurkeeda u gaarka ah, waxa keliya ee looga baahan yahayna aytahay in uusan khilaafsanayn Dastuurka qaranka.
Dastuurka federaalku Muxuu Ka qabaa in Dowlad Gobaleedyadu samaystaan Dastuurro u gaar ah?
Dastuurka Federaalka KMG, wuxuu oggolaanayaa in Dowlad kasta oo ka mid ah Dowladaha Xubinta ka ah dowladda Federaalka ay yeelan karto Dastuur u gaar ah oo lagu qeexo qaab-dhismeedkeeda. Qodobka 120 ee dastuurku wuxuu qeexayaa in dhismaha laamaha sharcdejinta iyo fulinta ee maamullada Dawladaha xubinta ka ah Dawladda Federaalka ay tahay arrin lagu nidaaminayo Dastuurrada maamul-goboleedyada. Taa micnahaydu wuxuu yahay in Dastuurka qaranku uu oggolaanaayo in dowlad gobaleedyadu yeesshaan Dastuurro u gaar ah si loogu caddeeyo qaab-dhismeedka Dowlad Gobaleedka, waxaa kale oo xusid mudan in dastuurka federaalku uusan ka hadlin qaab-dhismeedka dowlad Gobaleedyada haddii laga reebo Mabaadi’da iskaashiga heerarka dowladaha ee Dastuurku uu si guud uga hadlaayo.
Dastuurka federaalku wuxuu dhigayaa hal shardi oo Muhiim oo ay lamahuraan tahay in laga helo dastuurrada Dowlad Gobaleedyada, shardigaas oo ah in Dastuurrada Dawlad gobaleedyadu aysan khilaafin Dastuurka federaalka sida uu tilmaamaayo qoddobka 121aad ee Dastuurku.
Marka aan eegno laba qoddob ee aan soo sheegnay waxaan dhihi karnaa in Dastuurka Soomaaliya arrintaan kala mid yahay Dastuurada wadamada Swisarland Belgiumka, Germany iyo Argentina, oo Dowlad Gobaleedyada u oggolaanayo in ay Samaystaan Dastuurro u gaar ah kuna xiraaya shuruuda gaar ah .
Maxkamadda Dastuuriga ah awood ma u leedahay Burrinta Dastuurrada Dowlad Gobaleedyada ee Khilaafsan Dastuurka heer Federaal?
Mar haddii Dowlad Gobaleedyada loo oggolyahay in ay samaystaan dastuurro u gaar ah waxaa suurtagal ah in dastuurrada qaarkood laga helo qoddobo si toos ah ama si dadban uga hor imaanaaya mabaadi’da, iyo qoddobada Dastuurka federaalka.
Haddaba , waxaa is waydiin mudanmaxkamadda Dastuuriga ah awood ma u leedahay Burrinta qoddobada ku jira Dastuurrada Dowlad Gobaleedyada ee Khilaafsan Dastuurka heer Federaal?
Ugu horreyntii waxaa muhiim ah in aan oganno in uusan dastuurka federaalka Ku jirin Qodob si gaar ah u xusaaya in Maxkamadda Dastuuriga ah ay awood u leedahay burrinta Qoddobada ku jira Dastuurrada Dowlad gobaleedyada ee ka hor imaanaaya ama khilaafsan Dastuurka federaalka, hase yeeshee waxaa jira qoddobo Dastuurka federaalka Ku jira oo arrintaas si guud u tilmaamaya.
Qodobadaas Waxaa ka mid ah farqadda labaad ee Qodobka 4aad ee Dastuurka FKMG oo u qoran sidaan (Sharci kasta ama tallaabo maamul oo ka soo horjeedda Dastuurka, maxkamadda Dastuuriga ah ayaa awood u leh burrinta sharcigaas ama tallaabadaas maamul, si waafaqsan Dastuurkan)
Erayga ku qoran Farqaddaan ee (Sharci Kasta) wuxuu muujinayaa in Sharciyada ay Burrin karto Maxkamadda Dastuuriga ah Haddii ay Khilaafaan Dastuurka qaranka ay ku jiraan Dastuurradda Dowlad Gobaleedyada.
Qoddobada kale ee si guud u tilmaamaya in Maxkamadda dastuurku ay Burrin karto Dastuurrada Dowlad Gobaleedyada ee Khilaafsan Dastuurka Federaalka waxaa ka mid ah Xarafka D Farqadda 1aad ee Qodobka 109C. ee ka hadlaayo awoodaha Maxkamadda Dastuuriga ah oo u qoran Sidaan
( In ay go’aamiso khilaafyada u dhexeeya dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyadaxubinta ka ah dawladda federaalka). Sababtoo ah Khlaafyada Imaan kara waxaa ka mid ah Khilaaf la xiriira qoddobada Dastuurrada Dowlad Gobaleedyada oo Khilaafsan kan federaalka.
Shaki kuma jiro in Mowduucaan uu muhiim u yahay Hanaanka hirgelinta nimaadka Federaalka ee aan qadannay sababtoo ah haddii aan si qoto dheer looga fikirin Waxaa imaan karo isku dhac iyo Khilaaf u dhaxeeya Dastuurka Federaalka iyo Dastuurrada Dowlad Gobaleedyada arrintaas oo keeni karta khilaaf dastuuri ah oo qoto dheer ragaadiyana Hawlaha qaranka.
Ugu dambeyntii Waa in lagu daboolaa Dib’ueegista Dastuurka federaalka dulduleelada Laxiriira arrintaan oo ay Ka mid yihiin kuwa soo socdo:
Dastuurka federallku waa in uu Shuruudo cad cad ku xiraa Samaynta Dastuurrada Dowlada Xubinta ka ah dowladda federaalka.
Dastuurka waa in si toos ah loogu sheegaa in Maxkamadda Dastuuriga ah ay awood u leedahay Burrinta Dastuurrada Dowlad Gobaleedyada ee Khilaafsan dastuurka qaranka.
Dastuurka sidoo kale waa in lagu caddeyaa in dastuurada Dowlad Gobaleedyada laftoodu ay kala duwanaan karaan iyo inkale.
Waxaan rajaynayaa in Daraasadaan Gaabani ay ifisay arrimo badan oo Muhiim u ah hirgelinta Nimaadka Federaalka ee aan qaadannay.
Dastuurka Federalka KMG 1 Aug, 2012
Assefa Fisha: Ethiopian federalism 2009
John Law: How Can We Define Federalism, Perspectives on Federalism, Vol. 5, issue 3, 2013
Erato Kozakou-Marcoullis: Understanding Federalism: Different models-Different Challenges Advantages-Disadvantages, 21 December 2015
Elliot Bulmer: Federalism International IDEA Constitution-Building Primer 12, © 2017 International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) Second edition first published in 2015.
Markus Böckenförde : A Practical Guide to Constitution Building: The Design of the Legislature, © International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), 2011.
Böckenförde, M. et al., Max Planck Manual on Different Forms of Decentralization, 3rd edn (Heidelberg: Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, 2008)
Carey, J. and Shugart, M. S., Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics (Cambridge: Cambridge University Press, 1992).
Max planck foundation for international peace and the rule of law: comparative manual on federalism in Somalia, Heidelberg, 2016
 fiiri farqadda 1aad ee Qodobka 1aad iyo farqadda 3aad ee qodobka 3aad ee Dastuurka FKMG
 fiiri Qoddobada 50aad iyo 51aad ee Dastuurka FKMG
د\_ محمد فتوح , رءيس الدولة في النطام الفيدرالي . ص 17
 fiiri Cutubka 5aad ee Dastuurka oo si wanaagsan u falanqaynaaya qaabdhismeedka Dowladaha Heer fedraalka iyo kuwa Heer Dowlad Gobaleed, Mabaadi’da Federaalka iyo hannaanka iskaashiga Heerarka Dowladaha, gaar ahaan qoddobada 48aad ilaa 54aad ee Dastuurka FKMG.
 Fiiri qodobka 120aad ee Dastuurka FKMG
 Fiiri qoddobka 121aad ee Dastuurka FKMG
 Fiiri farqadda 2aad ee Qodobka afaarad ee Dastuurka.